Emmerson Mnangagwa - The Statesman
African leaders gather in Zimbabwe for ex-President Robert Mugabe’s state funeral
Incumbent President Emmerson Mnangagwa will address mourners at the National Sports Stadium, where thousands will wear the colours of the ruling Zanu-PF party.
Ex-Zimbabwe leader Robert Mugabe’s family agree to bury him in national monument
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa expressed his heartfelt demise of Mugabe, calling him nation's "founding father".
The Zimbabwean opposition leader on Friday refused to recognize the incumbent's victory in this week's presidential election.
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa has said the US government made its recent decision to extend sanctions against Zimbabwe on the basis of misinformation by opposition parties which are afraid of losing the upcoming elections. Last week, the US extended its decades long sanctions against Zimbabwe, imposed in protest over Harare’s land reforms in which white-owned …
Continue reading "US misinformed about situation in Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa"
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Monday swore in Cabinet ministers, their deputies and ministers of state for provincial affairs at the State House here. The swearing-in ceremony comes after Mnangagwa appointed a 22-member Cabinet last week. Speaking to reporters after the ceremony, Mnangagwa said the interim government will be in office for about seven months, …
Continue reading "Zimbabwean President swears in Cabinet ministers"
Emmerson Mnangagwa was sworn in as Zimbabwe’s new President on Friday in a ceremony at a packed stadium here, marking the end of Robert Mugabe’s 37-year reign. The ceremony took place at the capital’s National Sports Stadium and was attended by dignitaries, including leaders from various African countries. Mnangagwa, 75, was led in the oath …
Continue reading "Emmerson Mnangagwa sworn in as Zimbabwe President"
Zimbabwe’s incoming President Emmerson Mnangagwa on Wednesday thanked Zimbabweans and the military for their support. In his first public address to supporters upon his return to Zimbabwe from exile, Mnangagwa said he was humbled by the outpouring of support after he was sacked by former president Robert Mugabe two weeks ago, Xinhua news agency reported. …
Continue reading "New Zimbabwe President thanks public, military for support"
Zimbabwe’s recently fired vice president is set to return on Wednesday to be sworn in as the country’s new leader. The transfer of power to Emmerson Mnangagwa comes after Robert Mugabe announced his resignation in the middle of impeachment proceedings again him. Zimbabweans erupted in response, cheering and dancing in the streets. Now the focus …
Continue reading "Zimbabwe poised to swear in new president, Mnangagwa"
Zimbabwe’s former Vice President Emmerson Mnangagwa, whose sacking led to last week’s Army takeover, on Tuesday urged President Robert Mugabe to resign immediately. Speaking from an undisclosed location, Mnangagwa said he won’t return to Zimbabwe until he was sure he would be safe despite an invitation from Mugabe to discuss “the current political events in …
Continue reading "Zimbabwe ex-VP urges Mugabe to resign"
It was an almost inexplicable contradiction, indeed a euphemism, that Zimbabwe presented to the world on Wednesday. As tanks rumbled on the streets of Harare, the capital ~ with the 93-year-old President Robert Mugabe in military custody ~ the army was overly anxious to “make it abundantly clear that this is not a military takeover …
Continue reading "The ‘Crocodile’ bites"